Inona no atao hoe Swag? Mendrika ny fampiasam-bola ara-barotra ve izany? | Martech Zone
Inona no atao hoe Swag? Mendrika ny fampiasam-bola ara-barotra ve izany?
Talata, May 3, 2022 Talata, May 3, 2022 Douglas Karr
Raha efa ela ianao no nanao raharaham-barotra dia fantatrao izay swag dia. Efa nanontany tena ve ianao momba ny niandohan'ny teny? Ny swag dia tena fitenenana ho an'ny fananana halatra na fandrobana nampiasaina tamin'ny taona 1800. Ny fepetra bag azo inoana fa ny loharanon'ny teny filamatra… dia napetrakao tao anaty kitapo boribory ny entanao rehetra ary nandositra niaraka tamin'ny anao ianao swag. Noraisin'ny orinasa mpaka raki-peo io teny io tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 rehefa nanangona kitapo misy fanomezana sy fitaovana misy marika miaraka amin'ny famoahana rakikira vaovao… nanantena fa hibanjina bebe kokoa ny mpanakanto azy ireo DJ.
Tsy niova firy ny paikady… ivelan'ny hoe tsy mila mandroba olona intsony ianao. Tsidiho miaraka amin'ny marika iray any amin'ny foiben'izy ireo na amin'ny fihaonambe, ary matetika ianao no mihaona amin'ny zavatra azo alaina maimaim-poana… Mazava ho azy, ny swag sasany dia mahatsiravina, mora, ary tsy mahita afa-tsy ny fako ao amin'ny hotely. Ny safidy hafa dia tena tsara.
Ny iray amin'ireo entana swag tiako indrindra dia USB drive avy amin'ny malaza eran-tany St. Elmo's Restaurant ao afovoan-tanànan'i Indianapolis. Rehefa nizara an-tserasera momba ny fitsangatsanganana ara-barotra sy fianakaviana vitsivitsy izay nandaniako tany aho, dia nanaitra ahy ny ekipan'ny varotra tamin'ny kitapo feno zava-manitra, saosy ary ity vatosoa kely ity. Apetrako (vovoka) eo ambonin'ny latabatro ilay izy ary mitondra fahatsiarovana mahafinaritra ny trano fisakafoanana foana… sy ny cocktail makamba azy.
Miasa ve ny Swag?
Eny, izany ny $ 24 lavitrisa fanontaniana, sa tsy izany? Ny valiny marina dia… indraindray. Ny teoria ao ambadiky ny swag dia multidimensional:
Brand - Amin'ny alàlan'ny marika fanomezana maimaim-poana dia afaka manorina fanentanana marika ianao.
Memory - Amin'ny fanomezana zavatra ara-batana, ny vinavina na ny mpanjifa dia miala amin'ny zavatra mampahatsiahy azy anao, ny marikao, ny vokatrao, na ny serivisinao.
Reciprocity – Isaky ny manome fanomezana ho an'ny olona iray ianao, na dia kely aza, dia misy fahatsapana maha-olombelona izay tiantsika haverina amin'izany olona izany.
Nanao andrana A/B ireo olona ao amin'ny Sales Hacker izay nanampiana tolotra iray… ary taitra mihitsy aza izy ireo tamin'ny vokatra:
Ny vondrona nahazo swag dia avo telo heny noho ny famandrihana fivoriana, ary ny Outreach dia nahita fitomboana 2.42x amin'ny sandan'ny fahafahana isaky ny ho avy ao amin'ny vondrona fitsapana.
Izaho manokana dia mankasitraka kokoa ny maha-tokana sy lafo swag mihoatra noho ny vidim-piainana mameno fanariam-pako. Indrindra raha misy vidiny amin'ny mpandray anao izany. Misy maningana, mazava ho azy. Tsy mampiasa kapila USB Shrimp Cocktail aho… fa tena mangatsiaka be ka apetrako eo amin'ny latabatro izany.
Aiza no ahafahanao manamboatra, manafatra ary mitantana ny Swago?
Tena nandany fotoana be ny namolavola swag, nanonona azy, ary nanafatra izany mba hampihenana ny fandaniana. Ny tranonkala dia niroborobo niaraka tamin'ny tranokala am-polony izay azonao atao amin'ny alàlan'ny fako mora vidy, any ivelany izay tsy fantatrao ny hatsaran'ny. Niezaka aho nandritra ny taona maromaro mba ho ao anaty swag tsara ary mafana na mangatsiaka foana.
Swag.com dia tranokala namboarina manokana hividianana swag avo lenta ho an'ny marikao. Namboarina sy nanandrana vokatra an'arivony izy ireo - ary nametra ny fitadiavany ho amin'ny 5% ambony indrindra amin'ny vokatra izay manara-penitra, malaza ary mamela fahatsapana. Izy ireo koa dia nanao automatique ny traikefa rehetra amin'ny fividianana swag. Azonao atao ny mahita mora foana izay tadiavinao, mampakatra ny endrikao, maneso ny vokatrao, ary mijery ao anatin'ny segondra vitsy.
Swag.com dia manana vokatra ho an'ny trano, birao, akanjo, zava-pisotro, kitapo, teknolojia, fahasalamana, ary manana marika fanta-daza maromaro azo isafidianana. Azonao atao mihitsy aza ny mitantana ny efi-tranonao Swag an-tserasera:
Ankoatra ny famadihana ny fitarihana ho azo antenaina, ny swag dia azo ampiasaina mba hanomezana valisoa ny mpanjifanao tsara indrindra, hanao fivoriana an-tserasera, ary hifanerasera amin'ny mpiasa lavitra anao aza.
Manamboara Swag Mahafinaritra izao!
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Swag.com ary mampiasa ny rohy ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: miasa ny swagomena fotsinycommande swagreciprocitycocktail makambast elmosswagswag.comusb drive
Ny dingana 4 hampiharana na hanadiovana ny angona CRM mba hampitomboana ny fahombiazan'ny varotrao
CometChat: Text, Text Group, Voice, ary Video Chat API sy SDK